Pamba Panombofanira Kuva Nemitemo Here? | Vechiduku Vanobvunza Kuti
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Estonian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Myanmar Nepali Norwegian Nzema Ossetian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tatar Telugu Thai Turkish Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Uri kurwadziwa nemumwe mutemo wepamba here? Nyaya ino nepepa rezvekuita rinofambidzana nayo zvichakubatsira kutaura nevabereki vako nezvazvo.
Zvisiri zvechokwadi ndezvekuti: Paunobva pamba uchinogara wega, zvemitemo zvichabva zvapera zvachose.
Chokwadi ndechekuti: Mitemo haiperi nekuti hausisiri kugara nevabereki. Pane wauchatofanira kuteerera chete​—zvimwe ndeuya waunoshandira, muridzi wepamba paunoroja, kana kuti kunyange hurumende chaiyo. “Ndinofunga kuti vechiduku vasingateereri mitemo yepamba vachaona chitsvuku pavanenge vava kugara vega,” akadaro Danielle ane makore 19.
Bhaibheri rinoti: ‘Teererai hurumende nevanhu vane masimba.’ (Tito 3:1) Kudzidza kurarama nemitemo yevabereki vako kunenge kuchikurovedza kuti ugadzirire kutarisana nezvinhu zvichaitika muupenyu hwako kana wakura.
Zvaunogona kuita: Dzidza kuona zvakanakira mitemo. “Mitemo yevabereki vangu yakanyatsondibatsira kudzidza kusarudza shamwari dzakanaka uye kushandisa nguva yangu zvakanaka,” rinodaro rimwe jaya rinonzi Jeremy. “Uyezve, mitemo yacho yakandibatsira kuti ndisanyanya kuona TV nekutamba mavideo game asi kuti nditsvage zvimwe zvekuita zvine musoro​—zvimwe zvacho zvandichiri kutonakidzwa nazvo nanhasi.”
Asi zvakadini kana mumwe mutemo uchiita seusina musoro? Semuenzaniso, mumwe musikana anonzi Tamara akati: “Vabereki vangu vakandibvumidza kuenda kune imwe nyika, asi ndadzoka kudai, havachadi kuti ndiende kune rimwe guta riri pedyo nekwatinogara, panongotora maminitsi 20 chete uchidhiraivha!”
Kana uri mumamiriro ezvinhu akafanana neaya, zvinganzi zvakaipa here kana ukataura nevabereki vako nezvemutemo wacho? Aiwa! Zvinokosha ndezvekuti uzive kuti unofanira kutaura navo riini uye kuti unotaura navo sei.
Riini. “Kana wamboratidza kwenguva refu kuti uri munhu anogona kuvimbwa naye nekuti unoita zvinhu zvakati twasu, zvinobva zvava nyore kutaura nevabereki vako nezvenyaya yekugadzirisa mumwe mutemo wepamba,” akadaro mumwe musikana wechiduku anonzi Amanda.
Mumwe musikana anonzi Daria akaona kuti mashoko iwayo ndeechokwadi. Akati: “Amai vangu vakanga vasingatombodi kunzwa nezvekuchinja mitemo yavo kusvikira vaona kuti ndaigara ndichiteerera.” Usakanganwe kuti, munhu anofanira kushanda kuti avimbwe naye, kwete kuita zvekumanikidza vanhu kuti vavimbe naye.
Kugara pamba pasingachengetwi mitemo yevabereki, kwakangofanana nekuedza kumhara panhandare yendege pasingachengetwi mitemo.
Bhaibheri rinoti: “Chengeta murayiro wababa vako, usasiya mutemo waamai vako.” (Zvirevo 6:​20) Ukateerera yambiro iyoyo, vabereki vako vachaona kuti uri munhu anogona kuvimbwa naye uye zvichava nyore kuti utaure navo.
Sei. “Pakutaurirana nevabereki vako, kuva munhu anoremekedza uye akadzikama kuri nani pane kuvanyunyutira zvinosvota kana kuti kuvakwidzira inzwi,” anodaro mumwe mukomana anonzi Steven.
Daria, ambotaurwa nezvake, anobvumirana nazvo. Anoti: “Pandaiitisana nharo namhamha, hapana zvaimbochinja. Kutaura zvazviri, vaibva vatonyanya kusunga zvinhu.”
Bhaibheri rinoti: “Benzi rinobudisa hasha dzaro dzose, asi munhu akachenjera anoramba akadzikama kusvikira pakupedzisira.” (Zvirevo 29:11) Kudzidza kuzvidzora kunobatsira, kwete pamba chete, asiwo kuchikoro, kubasa nekumwewo.
Zvaunogona kuita: Funga usati wataura. Kukurirwa nehasha kamwe chete kunogona kuputsa chivimbo changa chava kuiswa nevabereki vako mauri. Ndokusaka Bhaibheri richitaura kuti “munhu anononoka kutsamwa ane ungwaru kwazvo.”​—Zvirevo 14:29.
Zano: Shandisa pepa rezvekuita riripo kuti ufunge nezvemitemo, uye kana uchida, taurirana nevabereki vako nezvenyaya iyi.
“Mitemo inodzidzisa wechiduku kuti ave munhu anoremekedza vamwe uye anozvidzora​—unhu hwaunotofanira kuva nahwo kunyange wakura. Kudai pasina mitemo, ndaisazoziva kuti upenyu hwangu huri kuendepi uye kuti ndinofanira kugumira papi pandinoita zvinhu.”​—Kimberleigh.
“Pandaimbofunga kuti mitemo yevabereki vangu haiiti, kazhinji kacho ndainge ndichangobva kuita chimwe chinhu chakaita kuti vasavimba neni kana kuti ndainge ndichida kutoita chimwe chinhu chaigona kuzondiipira. Iye zvino ndava kuzvioona kuti mitemo yevabereki vangu yaitondibatsira.”​—Kaley.